Maleeshiyo Maraykanka gudihiisa ugu “tababaranaya khaarajinta Obama” - BBC News Somali
Maleeshiyo Maraykanka gudihiisa ugu “tababaranaya khaarajinta Obama”
Xigashada Sawirka, PAUL RATJE/AFP/GETTY IMAGES
Larry Mitchell Hopkins (bidix) oo la hadlaya xubno kamid ah maleeshiyada
Nin la tuhunsan yahy inuu hogaamiyo koox maleeshiyo ah oo saldhigeedu yahay gobolka Nex Mexico ee dalka Maraykanka ayaa la sheegay inuu ku faanay qorshe lagu khaarajinayo madaxweynihii hore, Barack Obama, sida ay shaacisay FBI-da.
Larry Mitchell Hopkins oo 69 jir ah iyo kooxdiisa United Constitutional Patriots ayaa sidoo kale qorsheynayay inay bartilmaameedsadaan Hillary Clinton iyo maalqabeenka George Soros, sida lagu sheegay xog ay heshay hay'adaasi dembi baarista.
Ma cadda goorta uu ninkaasi ku faanay qorshaha, balse qareenkiisa ayaa beeniyay eedeymahaasi.
"Waxa uu sheegay in warkaasi been yahay, oo aanu jirin qorshe noocaasi ah," ayuu yiri qareenkiisa Kelly O'Connell oo u warramay telefishinka NBC News.
Mr Hopkins ayaa Isniintii la soo taagay maxkamad ku taal Las Cruces ee gobolka New Mexico, waxaana lagu eedeeyay in isagoo dembiyo hore galay uu haddana hub iyo rasaas haystay.
Ninkaasi ayaa la qabtay Sabtidii, maalmo kadib markii ay kooxdiisa soo jiidatay indhaha warbaahinta kadib markii ay qabteen muhaajiriin marayay saxaraha u dhow soohdinta uu Maraykanka la leeyahay Mexico.
Xigashada Sawirka, DONA ANA COUNTY DETENTION CENTER VIA REUTERS
Larry Mitchell Hopkins, oo 69 jir ah ayaa waxaa xiray FBI-da
Kooxda ayaa ku doodaysa inay ka caawinayso ciidamada ilaalada xuduudaha ee Maraykanka wax ka qabashada muhaajiriinta tirada badan ee dalkaasi kaga soo qulqulaya xuduuda koonfureed, balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa dhaliilay falalka ay kooxda kula kacday soogalootiga.
FBI-da oo markii ugu horreysay ka war heshay jiritaanka kooxda United Constitutional Patriots sanadkii 2017, ayaa sheegtay in xilligaasi ay ka koobnaayeen ilaa 20 xubnood oo ku hubaysan qoryaha AK-47 iyo hub kale.
Balse qareen O'Connell ayaa su'aal geliyay sababta ay u qaadatay muddo laba sano ah in dembi lagu soo oogo ninka uu u doodayo. Waxa uu intaa ku daray in FBI-da ay sanadkii 2017 baaritaan ku samaysay guriga Hopkin, balse ay halkaa ka heleen hub uu Mr Hopkin sheegay inay leedahay xaaskiisa, sidaa awgeedna ay iska dhaafeen.
Mr Hopkins ayaa wajahaya ilaa toban sano ee xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 250,000 oo dollar, sida uu sheegay wargeyska Las Cruces Sun-News.
TOOS Maxay ka dhigan tahay soo noqoshada Fahad Yaasiin?